« Mpanao film malaza » -
AccueilTresaka« Mpanao film malaza »
« Mpanao film malaza »
20/03/2017 admintriatra Tresaka 0
Nivoaka ny sabotsy teo tao amin’ny trano fijerena horonan-tsary malaza ao Danemark ny « film » an-dRavalomanana Marc. Mitondra ny lohateny hoe “ny fiverenan’ilay Filoha” na “Return of a President”. Izany vazaha antsoina hoe Lotte Mik-Meyer izany no namokatra azy. Tonga any an-toerana manatrika ny famoahana amin’ny fomba ofisialy an’io “film” io moa ny tenany, notronin’ny vadiny sy ny delegasiona niara-dia taminy.
Tsy misy maharatsy ny olona iray lasa “mpanao film malaza” tokoa aloha raha tantara manasongadina ny tsara vitany no resahana. Fa raha ity “film” an-dRavalomanana vaovao ity no jerena, dia mihodidina ny fanonganam-panjakana nisy tamin’ny 2009 izay nahatonga azy niala teto Madagasikara sy ny fiverenany indray no voiziny ao anatiny. Mazava amin’izay mijery an’ilay “film” avy hatrany, fa nanao ratsy matoa voaroaka an-tanindrazany ilay Filoha tantaraina anaty “film” io.
Efa tsinjon’ingahy Ravalomanana sahady fa any amin’ny fanaovana “film” mihitsy no mahamety azy. Rehefa naloam-bahoaka kosa ve tsy any amin’ny sehatra hafa no mampisongadina ny tena. Hevitra mety tokoa ny an-dRavalomanana ary tena mbola tsy fahitan’ireo mpanao politika eto amintsika. Ahiana ho maro no haka tahaka azy ka handeha hamokatra “film” toa azy koa atsy ho atsy. Sady ny sasany manana “fahitalavitra” hanaovana “matraquage” an’izany. Fa nahoana kosa no tsy mba naka an-dry Scoop Digital na ry Avoko Production ny filoha teo aloha fa avy hatrany dia naka teratany vahiny hanodina ny horonan-tsariny ? Mba efa manana ny maha izy azy ihany koa anie ny “sinema” Malagasy e ! Rehefa mba hivadika taranja lasa mpanao “film” ihany tsy aleo ve mba mampiroborobo ny sehatra eto an-tanàna ?
Araka ilay lohateniny “ Return of a President”, dia teny vahiny no nanaovana an’ilay film an-dRavalomanana. Miresadresaka ny fiverenany an-tanindrazana indray taorian’ny fanaovany sesitany ny tenany tany Swaziland sy Afrika Atsimo. Lasa fantatr’izao tontolo izao izany fa Ravalomanana dia filoha naongan’ny Malagasy noho ny tsy fahaiza-mitantana nataony. Fanta-poko fantam-pirenena amin’ny alalan’io “film” io ihany koa fa noho ny krizy izay nataony no nampiala azy teo amin’ny fitondrany. Izany hoe ny “échec” na ny tsy fahombiazan-dRavalomanana mihitsy no navandravandra eran-tany tamin’ny alalan’ny “film” amin’ny teny Anglisy. Dia mba hafa kely mihitsy ity filoha teo aloha ity. Tsy ampy azy ve ny fahavoazana efa nihatra taminy no mbola nandeha navadiny “film” indray ? Tsy aleo ve mba natao hoe “ny fisokafan’ny Tiko tao Madagasikara” na koa “ ny fialam-bolin’i Dada” sns…no natao “film” fa tsy tantara manaporfo an-tsary ny tsy fahombiazana toa io nivoaka tamin’ny sabotsy tany Copenhague Danemark io.